Iflethi yale mihla esembindini weSwiss Alps edumileyo - I-Airbnb
Iflethi yale mihla esembindini weSwiss Alps edumileyo
Iflethi ekhanyayo, enempahla epheleleyo kunye neflethi yale mihla kwisakhiwo esiphakamileyo esiseBlatten.
Iflethi inamagumbi okulala ayi-2, igumbi lokuhlala elivulekileyo elinekhitshi elivulekileyo neekhabhathi eziliqela. Indawo yokupaka, igumbi lokutyibiliza kwikhephu nendawo yokudlala yabantwana ziqukiwe kwindawo yokuhlala. Ngohambo lwemizuzu eyi-3 kuphela ukuya emotweni ukuya eBelap, unokonwabela ngokupheleleyo izinto ezininzi ezenziwa zii-alpine ezijikeleze i-UNESCO Aletsch Glacier unyaka wonke.
Ifakwe kumgangatho osezantsi, iflethi ineefestile ezinkulu ezinokuzuza ekukhanyeni kwelanga. Ikhitshi elivulekileyo linomatshini wokuhlamba izitya, ioveni, ifriji, izitya, ikofu kunye neti. Umphakathi wale mihla wenziwe ngobuchule ukuze uzive usekhaya kwaye uphucule indlela emi ngayo indawo yakho.
Unokonwabela iskrini esikhulu seTV NEWIFI yasimahla ngexesha lokuhlala kwakho.
Ukuze wamkele iindwendwe eziyi-4, igumbi lokulala eliphambili linebhedi elala abantu ababini ngelixa igumbi lokulala lesibini lineebhedi ezimbini ezilala umntu omnye. Ifenitshala efunekayo nezinto zebhedi zilahlwayo kuwe. Iitawuli, isixhobo sokomisa iinwele neemveliso zebhafu nazo ziyafumaneka kwigumbi lokuhlambela elihle nelakutshanje.
Ungakwazi ukufikelela kumatshini wokuhlamba impahla nowokomisa i-umble kwindawo yokuhlamba impahla esetyenziswa ngumntu wonke kwisakhiwo, ekumgangatho ofanayo neflethi. Ekubeni usezantsi kweentaba ezidumileyo zaseSwitzerland, unokufikelela kwigumbi lokutyibiliza kwikhephu lesakhiwo, kufutshane neflethi.
Le flethi yeyaseBergquell »eyayisandul 'ukwakhiwa embindini weBlatten, idolophu eqhelekileyo yaseValais eSwitzerland Le ndawo yokuhlala ijikelezwe ziivenkile zokutyela, iikhefi kunye neebhari, iivenkile zezipho kunye neevenkile ezinkulu. Uza kufumana iivenkile eziqhelekileyo kunye neevenkile zokutyela ukuze uve ngokupheleleyo indlela yokuphila yaseSwitzerland.
Ukusuka apho, uza kukwazi ukufikelela lula kwezona ndawo zimangalisayo zengingqi yaseValais kunye nezinye iindawo nezixeko ezininzi. Kwixesha ngalinye lonyaka, umhambi ngamnye nomntu ngamnye ozimiseleyo ukhona eyona nto ilungileyo: lixesha lokwenza iholide yamaphupha akho ifezeke!
Indawo yakho yokuhlala ikumgama wemizuzu eyi-3 kuphela ukusuka kwimoto eya ngqo kwi-resort edumileyo ye-Belalp eza kwanelisa wonke umntu othanda ukutyibiliza ekhephini. Zonke iindwendwe zinokonwabela izinto zokutyibilika ekhephini nezokutyibilika ekhephini, ukutyibilika ekhephini nokutyibilika ekhephini. Iintsapho ziyakwazi ukufikelela kwiZiko Lokukhathalela Abantwana ukuze zihoye abantwana zize zibone izinto ezimangalisayo ezenziwa ekhephini. Iziko elincinci lepaki lizisa abantwana kwihlabathi elimangalisayo le-Belalp Witch, iqhawe eliza konwabisa abantwana kunye nabantu abadala. Kubantu abathanda izinto ezingaqhelekanga, awukwazi nje ukutyibilika ekhephini okanye uhambe simahla kodwa unokonwabela ukuhamba ngephenyane okanye ukunyuka intaba ebusika kunye ne-paragliding. Akukho mda wolonwabo novuyo lwakho.
Xa sishwankathela, iindawo ezintle ziza kumangalisa iintsapho nabahambi abanokubona iindawo ezinemizila eyahlukahlukeneyo yokunyuka intaba neepaki zeentambo. Ukuze wonwabele imidlalo engakumbi, unokuba neeseshini zokuhamba ngebhayisekile ngoxa abantwana benokuzonwabisa ngezinto ezenziwayo zokuhamba ngebhayisekile.
Ukuba iBlatten-Belalp ayikwanelanga, masiye kwibhulorho yokunqumamiswa eza kukusa eAletschwald. Eli lihlathi lihle, elinemizila eyahlukileyo yokunyuka intaba, linika imimangaliso yendalo engakumbi onokuyibona. Ngokungafaniyo nokunyuka intaba ngeparagliding, ezi zinto zenziwa unyaka wonke, iiholide zasehlotyeni ziza kukunika ithuba lokuhamba ngephenyane eMassaschlucht!
Okokugqibela, siyakumema ukuba ubone le ngingqi ngeyona ndlela inkulu oza kuyonwabela : inqwelo-moya i-helicopter sigthseeing. Ngoxa wonwabele ezona ndawo zintle kunye neemvakalelo ezimangalisayo onokuba nazo, uza kuziva unobuncwane bethu baseSwitzerland: i- Matterhorn, i-Aletsch glacier kunye neJungfraujoch phakathi kwezinye ezininzi.